Adeegyada Hyperbaric - Daaweynta Oxygen Hyperbaric Therapy HBOT
Adeegyada Qalabka ah ee Qalabka ah (Hyperbaric Services - Hyperbaric Therapy Therapy) HBOT
Home/Adeegyada Hyperbaric/Adeegyada Qalabka ah ee Qalabka ah (Hyperbaric Services - Hyperbaric Therapy Therapy) HBOT
Adeegyada Qalabka ah ee Qalabka ah (Hyperbaric Services - Hyperbaric Therapy Therapy) HBOTtekna_mod2018-01-02T13:51:59+00:00
Adeegyada Qalabka ah ee Qalabka ah (Hyperbaric Services)
Ka qaybgalayaasha ganacsiga ee Daaweynta Hyperbaric Seminar
Goobta Xirfadaha Sawirka ee dhismaha la soo bandhigay
"Ganacsiga Daaweynta Hyperbaric Therapy" Seminar ee loogu talagalay kuwa tixgelinaya furitaanka isbitaal ama xarun xarun ah HBOT. Seminaarka waxaa inta badan la qabtaa maalmaha fasaxa ah ee udhow Tampa Florida. Ka qaybgalayaasha soo qaada filimka PA & Lateral recent-ka ah ayaa laga yaabaa in ay la kulmaan ficil-celin sare ee labadaba Class iyo A Class B HBOT. Haddii aad haysato 5 ama dad ka badan waxaan ku qaban doonaa seminaarkaaga goobtaada.
POCD (Tilmaamaha Xiriirka Xiriirka) haddii aad na siiso sawirrada digitalka ah ee dhismahaaga la soo bandhigay waxaanu ku siin doonaa POCD muujineysa waxa loo baahan yahay in lagu hoggaansamo NFPA 99-2015 Xeerka Dabka ee Qaranka iyo Biyaha Maqalka-Gaaska.
Hordhac ahaan Adeegyada TEKNA Consulting Services waxaan ku siin doonaa nalalka nalalka oo la xidhiidha raadintaada suuqa.
Dib u eegid Ganacsi leh Marshall Fire waxay u adeegtaa si loo tirtiro dhibaatooyinka xulashada goobta ee hawlaha HBOT.
Sahannada Suurogalnimada Suuban xaqiijin in goobta ay ku haboon tahay hawlaha HBOT iyo waxa looga baahan yahay noo Buuga Farsamooyinka Hagaajinta FDA Good.
Qiimaha ugu Fiican Oxygen Liquid waxaanu ka caawinnay daraasiin macaamiishayada ah inay helaan qiimaha ugu jaban ee ku saabsan oksijiinka heerka khatarta ah.
"Tababarka Adeegga" waxaa lagu daraa iyada oo aan wax kharash ah la leh dhamaan qalabkeena. Shahaadooyinka waxaa la siiyaa dhamaan shaqaalahaaga oo dhigta koorsada tababarka buuxa. Shahaadooyinka lama siinayo kuwa qayb ahaan ka qeybgalaya tababarka.